Umkhiqizi kanye nomhlinzeki we-FBA Isitolo esidayisa yonke impahla | Ngesikhathi
Ukuthunyelwa ezindaweni zokugcina izimpahla ze-Amazon FBA kubhekwa njengokungeniswa kwe-B2B ezweni eliya kulo. Ngabe ufuna ukuthumela i-inventory endaweni yokugcina impahla yase-Amazon ngaphandle kwe-China? Ungazizwa ukhungathekile, i-manufactur ...
Ukuthunyelwa ezindaweni zokugcina izimpahla ze-Amazon FBA kubhekwa njengokungeniswa kwe-B2B ezweni eliya kulo. Ngabe ufuna ukuthumela i-inventory endaweni yokugcina impahla yase-Amazon ngaphandle kwe-China? Ungazizwa ukhungathekile, umenzi akakaze alungiselele izimpahla ze-FBA, udinga ukuchaza kaninginingi. Ngaphezu kwalokho, ukungenisa kwamanye amazwe kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kuhlala kuyikhanda. Manje silapha ukukusiza. Sinikeza amakhasimende izinsizakalo zokuqoqa abashayeli emadolobheni amakhulu e-China, ukufakwa kophawu lomkhiqizo, ukuvunyelwa kwamasiko emazweni lapho uya khona, kanye nezinsizakalo zokulethwa kwamamayela wokugcina ezindaweni zokugcina ze-FBA ezise-United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, United States, ECanada naseMexico. Akunandaba ukuthi ukuphi, ithimba lethu elinolwazi lokuhweba lizohlala likusindisa kunoma yiziphi izinkinga zenkambiso. Umoyaimithwalokubiza kakhulu ukuthola izimpahla ezinkulu? Ayikho inkinga. Sisekela ukulethwa kwezinsizakalo zomoya noma zasolwandle endaweni yokugcina izimpahla ye-FBA. Zombili izinsiza zingakusiza wonge imali futhi uhlangabezane nezidingo zebhajethi.
Iqala kanjani ukusebenza?
Okwethu ukuphathwa kwezinto izixazululo zihlanganisa amazwe angaphezu kuka-200 nezifunda emhlabeni wonke ngezinsizakalo zeposi, imigqa ekhethekile futhi ukuvezaimeyili. Kusukela ekugcwalisekeni kwe-e-commerce kuya ekulethweni kwempahla
Uyacelwa ukuthi uxhumane nabasebenzi bethu abasebenza online kumakhasimende ukubhalisa i-akhawunti
Thumela imikhiqizo yakho ku-GZ Ontime bese udala uhlelo lwakho lwe-Amazon.
Abahlinzeki bethu banesibopho sokufaka ilebula yemikhiqizo nokulungisa amadokhumende enziwe ngokwezifiso ukuze athunyelwe.
Qedela ukuvunyelwa kwamasiko bese uletha endaweni yokugcina izimpahla ye-FBA.
Langaphambilini Izindiza Zezindiza
Olandelayo: Insizakalo yokuhanjiswa kwempahla yamazwe omhlaba i-DHL FedEx UPS China iya e-USA
Idlulisela Isevisi ye-FedEx Kusuka eChina iye kuFed Ex Sh ...
I-DHL FedEX UPS express serviceUmkhumbi wamazwe omhlaba ...